Brihuega Lavender Minda | Kufamba Nhau
Maria | | Spain maguta, Kufarira
Kwenguva yakareba, minda ye lavender yeProvence yakave yakakosha nzvimbo yekushanya kune vanoda zvekushanya kwekumaruwa, zvisikwa uye kutora mifananidzo. Gore rega rega ivo vanokwezva zviuru zvevashanyi vachitsvaga akanakisa kuvira kwezuva epepuru pamwe nezviitiko zvakanakisa mumisha inoyevedza yedunhu iri.
Asi kwemakore hazvidiwe kuenda kuFrance kunonakidzwa neminda ye lavender. MuSpain isu tateedzera vavakidzani vedu nekurima kweichi chinonhuhwirira chirimwa chine zvinhu zvinonyaradza. Anopfuura maminetsi makumi mana nemashanu kubva kuMadrid ndiBrihuega, musha wakanaka weAlcarreña uyo mukati memwedzi waChikunguru ungaratidzika kunge rimwe guta muFrench Provence.
Munguva yezhizha, iyo nguva yekuzara kwemaruva inoitika kune angangoita chiuru mahekita eminda yemarara elavender inotenderedza guta pamwe nenharaunda yayo, iyo inopa yakasarudzika mamiriro enzvimbo yepepuru uye bhuruu toni mumoyo weGuadalajara. Brihuega haisi Provence asi chave chiratidzo chakatotungamira kumutambo wetsika. Zvinoshamisa!
1 Nzira yekusvika sei kuBrihuega?
2 Kwakatangira iyo lavender minda yeBrihuega
3 Brihuega Lavender Mutambo
4 Chii chekuona muBrihuega?
Nzira yekusvika sei kuBrihuega?
Brihuega iri kumadokero kwedunhu reGuadalajara, iri panzvimbo yakatetepa kubva kubani reAlcarreña kusvika kumupata werwizi weTajuña. Iyo iri 33 makiromita kubva kuGuadalajara, 90 kubva kuMadrid uye makiromita gumi nemaviri kubva Highway N-II. Ku maodzanyemba akadziva kumadokero kwedunhu reGuadalajara uye kumahombekombe ekuruboshwe kwerwizi rweHenares, nharaunda yeLa Alcarria iri, iri kune vakawanda guta rayo guru reBrihuega.
Kwakatangira iyo lavender minda yeBrihuega
Brihuega yagara iri dhorobha revarimi uye vafudzi iro raivewo nemamwe maindasitiri sezvo raive dzimbahwe reRoyal Cloth Factory, raive richishanda kudzamara Hondo yeVanhu veSpain. Sezvo makore akafamba, mamiriro ehupfumi akatanga kushaika uye maAlcarria mazhinji akatamira kunotsvaga mikana iri nani yemabasa.
Panguva iyoyo ndipo pakarimwa murimi wemuno anonzi Andrés Corral kuenda kuFrance Provence ndokuwana minda yelavender nemikana yavo. Nekuda kwehunhu hwemuti, akanzwisisa kuti zvaive zvakanaka kurimwa muBrihuega uye akatanga chiitiko chekurima pamwe nehama dzake uye mupfuhwira. Vakavakawo lavender essence distiller chirimwa icho chinogadzira 10% yekugadzirwa kwenyika uye inoonekwa seyakagadzirirwa kwazvo muEurope.
Iyi purojekiti yakagadzira mabasa mazhinji mudunhu uye zvakakonzera kumutsiridzwa kwenzvimbo iyo yakanga yave kutanga kupinda mukutambudzika.
Brihuega Lavender Mutambo
Izvo zvakatanga sechiitiko pakati peshamwari chave chiitiko chekunakidzwa yakasarudzika gastronomic uye mimhanzi ruzivo mune isingaenzanisike mamiriro Inopembererwa pakutanga kwekukohwa kwelavender uye inogara kwemazuva maviri. Iyo Brihuega City Council inoronga mafambiro akatungamirirwa iyo inosanganisira kutakura bhazi kubva kuguta reMaría Cristina paki, vhiki rega rega muna Chikunguru.
Kana Mutambo weLavender wapera, mamirioni emaruva anounganidzwa uye ndokudarika nepakati pemanyoro, achibvisa hunhu hwavo uye kuva chikamu chemafuta nezvinonhuwira zvakanyanya pamusika.
Chii chekuona muBrihuega?
Brihuega iri mumupata werwizi rweTajuña uko kusviba kwemupata kwakariwanisa zita remadunhurirwa rekuti Jardín de la Alcarria nekuda kweminda yemichero yakapfuma neminda yakanaka. Iro guta rakakomberedzwa reBrihuega rakaziviswa Nhoroondo-Yehunyanzvi Saiti nekuda kwayo yetsika nhaka.
Rusvingo rwayo rwakatanga kubva muzana ramakore rechiXNUMX nemazana emakore apfuura masvingo aro akanyatsodzivirira guta. Yakavharirwa yazvino yakakura, ingangoita makiromita maviri kureba. Masuwo ayo, ayo eBall Court, ayo eChain kana Arch yeCozzagon, anovhura zvakavanzika zvake uye nhoroondo yeguta.
ICastillo de la Piedra Bermeja iri kumaodzanyemba kweguta. Pamusoro penzvimbo yekutanga yechiMuslim nhare, dzimba dzemhando dzechiRoma dzakawedzerwa muzana ramakore regumi nembiri uye gare gare iyo chechi yechimisikidzo yechiGothic yakavakwa.
Zvivakwa zvaro zvechitendero zvinotitorera mune zvakadzama zveRomanesque yekupedzisira uye misiyano yeGothic parwendo rwayo rwese: Santa María de la Peña, San Miguel kana San Felipe vanozviratidza. Masara eSan Simón iMudejar chishongo chakavanda kuseri kwezvivakwa zvakawanda.
Pakati pezvivakwa zveveruzhinji, horo yeguta uye jeri, dzimba dzeRenaissance dzakadai sedzanaGómez nedzimwe dziri munharaunda nyowani neSan Juan dzinomira. Asi pasina kupokana chivakwa chevagari par kugona kuri Royal Cloth Fekitori, muzinda webasa reBrihuega uye uyo ane mapindu kubva muna 1810 anokudza zita remadunhurirwa reguta rino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Spain maguta » Brihuega Lavender Minda
Chii chekuona muBali
Aragonese Pyrenees, zvakasikwa zvishamiso uye yakawanda nhoroondo